Waddooyinka Muqdisho oo saaka u xiran dabaal degga 1-da Luulyo iyo Basas loo diyaariyay shacabka – Weheliye.com
Waddooyinka Muqdisho oo saaka u xiran dabaal degga 1-da Luulyo iyo Basas loo diyaariyay shacabka
July 1, 2018 A.Hussein Wararka, Xulashada 0
Waxaa saaka gebi ahaanba xiran waddooyinka Muqdisho oo aan wax gaadiid ah shaqeyneyn, iyadoo loo dabaal degayo xuska 1-da Luulyo, markii gobolada Koofureed ay Xornimada qaateen iyo midowgii Gobolada Koofureed iyo waqooyi.
Dabaal degga 1-da Luulyo ayaa saaka ka dhacaya Garoonka kubadda cagta ee Koonis degmada C/casiis, halkaasoo ay ku qulqulayaan boqolaal ruux oo ka kala yimid degmooyinka.
Madaxda dowladda ayaa la filayaa in Garoonka Koonis kula hadlaan shacabka ka qeyb qaadanaya dabaal degga, waxaana jawiga guud ee magaalada u muuqdaa mid hareeyay dabaal degga maalinta 1-da, waddooyinka oo dhan ayaa waxaa la suray calanka Soomaaliya.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa saaka si aad ah loo adkeeyay, waxaa gebi ahaanba la hakiyay dhamaan wixii gaadiid ee magaalada ka shaqeynayay, sida baabuurta BL-ka iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa u diyaariyay shacabka Muqdisho basaskii ay dowladda Qatar ugu deeqday dowladda Soomaaliya, kaasoo dadweynaha looga soo qaadayo goobo kala duwan oo la cayimay.
Goobaha basaska dadweynaha ka soo qaadayaan ayaa waxaa ka mid ah Ex Koontarool Afgooye illaa Sayidka, Tarbuunka illaa sanca, sidoo kale dadweynaha ka qeyb qaadanaya dabaal degga 1-da Luulyo ayay Basaska ka soo qaadayaan daljirka dahsoon, iyagoo geynaya Garoonka kubadda Cagta Koonis, sidoo kale basaska ayaa ka shaqeynaya xaafado kale.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahan Duqa Muqdisho Eng. Yariisow ayaa sheegay in tallaabadan ay ugu gol leeyahay in shacabka aanay wax culeys dareemin, isla markaana loo sahlo isu socodka, bedelkii aanay shaqeyneyn gaadiidka, basas la diyaariyay looga soo qaadayo goobo kala duwan.
Hoobiyeyaal ku dhacay qeybo ka mid ah degmada Wadajir ee gobolka Banaadir